Ny Galaxy A42 5G, finday avo lenta Samsung mora indrindra, dia ho tonga any Espana amin'ny 3 Novambra | Androidsis
Na dia zara raha misy aza ny tamba-jotra 5G any Espana sy ny firenena maro dia maro ireo mpandraharaha milaza fa manolotra fandrakofana an'ity karazana tambajotra ity ho haingana kokoa noho ny 4G ankehitriny. Na dia tsy tena marina aza manasa ireo mpampiasa hanavao ny terminal-n'izy ireo hanao izany ho an'ny maodely 5G.
Samsung, mpanamboatra nivarotra finday avo lenta indrindra tamin'ny taona 2019 nifanaraka tamin'ny tamba-jotra 5G, nampidirina tamin'ny septambra lasa teo, ny Galaxy A42 5G, ny finday avo lenta finday mora indrindra takian'ny orinasa Koreana amin'ireo tambajotra ireo, terminal izay Efa misy daty fandefasana azy any Espana: 3 Novambra.
Ny Galaxy A42 dia miavaka amin'izany fakan-tsary quad, fampisehoana Infinity-U ary fiainana bateria lava, ireo lafin-javatra telo tadiavin'ny mpampiasa indrindra rehefa manavao ny terminal-dry zareo. Ny efijery dia mahatratra 6,6 santimetatra miaraka amin'ny fakantsary eo afovoany afovoan'ny efijery amin'ny endrika latsaka (Infinity-U). Ny batterie 5.000 mAh, izay hahafahantsika mankafy fatratra ny terminal mandritra ny andro nefa tsy manahy ny amin'ny famoahana azy.
Ny andiana fakantsary dia misy a 48 MP sensor lehibe, fakan-tsary 8MP ultra-wide, fakan-tsary ary fakan-tsary 5 MP. Eo aloha dia mahita fakantsary 20 MP ahafahantsika manao antso an-tsary sy selfie misy vahaolana avo lenta miaraka amin'ny famaritana avo indrindra.
Ao anatiny no ahitantsika a 8-core processeur miaraka amina RAM 4 GB sy fitehirizana 128 GB (azo ovaina amin'ny alàlan'ny karatra SD hatramin'ny 1 TB). Izy io dia mifanaraka amin'ny famahanana haingana 15W, manana sensor amin'ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery, seranan-tsambo USB-C, refy 164.3 × 75.8 × 8.6 mm ary lanja 193 grama.
Ny tsara indrindra dia ny vidiny: 349 euro. Hita amin'ny loko Prism Black, Prism White ary Prism Gray izany. Ho afaka hihazona izany isika amin'ny 3 septambra amin'ny alàlan'ny tranokala Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Ny Galaxy A42 5G, smartphone Samsung mora vidy indrindra, dia ho tonga any Espana amin'ny 3 Novambra
Mandraisa anjara amin'ny Big Brother, ilay lalao an-tserasera ahafahanao mahazo vola be